Icedove 10.0.2 ayaa laga heli karaa Imtixaanka Debian | Laga soo bilaabo Linux
Icedove 10.0.2 ayaa laga heli karaa Imtixaanka Debian
Sida aan wada ognahay, horumariyayaashu Debian Waqtigooda ku qaad in aad ku darto cusbooneysiin badan oo ka mid ah baakadaha laga heli karo keydadka, haddana waa markoodii Qoolley, codsi u muuqday in la ilaaway.
Qoolley waa fargeeto ah Thunderbird, oo ay hadda galeen kaydadka Tijaabada Debian nooca 10.0.2, oo ugu dambayntii la beddelay 3.1.10 version. Sida aan wada ognahay, Thunderbird ku jira 11.0.1 version mana sii dheereyn doonto ilaa 12.0. Waxaan u maleynayaa sida caadiga ah ragga ka soo jeeda Debian ma cusbooneysiin Icedove ilaa nooca 11 sababo amni ama xasillooni darro awgood.
Kaliya waa inaan cusbooneysiinaa haddii aan horeyba u rakibnay arjiga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto nooca ugu dambeeya ee Thunderbird o Firefox en Debian, Waan ku abaal marinayaa maqaalkan taas oo ina tusaysa sida looga yeello codsiyada asalka u ah Surfing Internetka ama Akhrinta Boosta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Icedove 10.0.2 ayaa laga heli karaa Imtixaanka Debian
Weligaa ha isticmaalin Icedove, way ka wanaagsan tahay Evolution.
Warkaas wanaagsan hadda waxaan cusbooneysiinayaa si aan u tijaabiyo mahadnaqa weyn ee macluumaadka.
Oscar waa inuu la mid ahaadaa Thunderbird laakiin dabcan sababta oo ah astaamaha ay Firefox leedahay, debian ma adeegsan karto (maxaa yeelay waa bilaash) maxaa yeelay waxay si uun ugu ganacsadaan barafka sida firefox.
Icedove waa nuqul bilaash ah oo laga yaabo in la habeeyay ee Thunderbird
sida foosha xun ee ay u akhriyaan
sieg84 waad saxantahay eraygaas wuxuu kudhowyahay inuu katago….
Maxaa loo adeegsanayaa ereyo la alifay oo ku saleysan luqado kale, sida "la habeeyay", markii aan horayba ugu haysannay afkeenna kuwo kale oo horay u muujiyay fikraddaas, sida xaaladdan "loo habeeyay"?
Custo ... waa maxay?
Mar baan kuu sheegay mar labaadna waan ku celiyey, ma aqbali doono in hal qof oo u qalma halkan laga qaado.
Faallooyinkaagu way sii socon doonaan in la tirtiro haddii aad sii wado cayda ama u qalmin akhristayaasha.
Waxaan horeyba uga tirtiray dhowr faallooyinkaaga cayda iyo markhaatiyada beenta ah, oo aanan ka labalabeyn doonin inaan sii wado hadaad sii wado isla.
Waa lagaa digay.
Anigu ma aqrinin faallooyinka aad tiraahdo waad tirtirtay, mid kaliya ayaa ku jira qashinka ... Waxaan ku weydiinayaa, ha tirtirin faallooyinka gebi ahaanba, waxaad u dirtaa qashinka si markaa dib loogu eegi karo mar kale faahfaahsan ama naftayda, maxaa yeelay waxaan u qaadanay arinta "faafreeb" mid aad u culus.
Waan ka saaray gebi ahaanba.
Ma ogtahay haddii qashinku uu gaabiyo ama wax uun? in ka badan wax kasta oo loogu talagalay mawduucaas.
Laakiin kaalay, waxa aan sameyn maayo waa ogolaanayaa aflagaado iyo xaqiraad, taas oo ninkaan horeyba u haystay inyar.
Eeg sida xiisaha leh, markaa miyaan tirtirnaa faallooyinkaaga? Sababtoo ah qaarkood waxaad ka gudubtaa troll. Fadlan Courage, marka xigta ee aad go'aansato inaad tirtirto faallo, hubi inay kaliya u socoto qashinka, haddii ay tahay inaad si joogto ah u tirtirto, waanu daryeeli doonaa taas KZKG ^ Gaara iyo aniga.
Maya, waxba kama gaabineyso, markaad u maleyneyso in ra'yi uu leeyahay aflagaado oo aan la oggolaan karin, waxaad u dirtaa Qashinka ama waxaad uga tagtaa inta la sugayo ama aan dib u eegi doono, laakiin marna ha tirtirin gebi ahaanba.
Akhriso waxa aan dhahay.
Ujeedadayda iyo taladiisu waa kala duwan yihiin, waad ogtahay inaanan fadeexadeyn doonin ama aanan ku wareegi doonin cay ama u qalmin, oo ninkan uu sameeyay.
Horey ayaan kuugu sheegay, faallooyinka nacasnimada ah ee aan dhammaanteen sameynay, oo adiguna adiguba waad kujirtaa, laakiin waa hal shay in la caayo iyo mid kale in faallo laga bixiyo.
Waan eegi doonaa haddii ay jiraan wax ikhtiyaar ah oo aan ku soo ceshano oo waxaan kaga tagi doonaa qashinka.
Qoolley quruxsan 🙂
Ma jiraa qof garanaya nooca KDE ee ku jira laanta Sid?
Hadda waxaan u maleynayaa inay la mid tahay tijaabada, 4.7.4.
Ku jawaab Shiba87
ahh ok ok ok haa waa tan maanta ay i weydiiyeen anna waxaan u iri si lamid ah .. laakiin waxaan doonayay inaan hubsado .. thanks 🙂
Waan ku faraxsanahay iceweasel (waagii hore waxaan joojiyay Firefox). Haddana markaan rakibo Debian Testing, waxaan isku dayay inaan rakibo onkodka, laakiin markaan helo macluumaadkan waxaan rakibay Icedove 10.0.6-2 (amd64). Way fiicantahay, waxaan ubaahanahay inaan u beddelo Isbaanish. Aynu taageerno horumarinta Debian. Mahadsanid.
Waxaan u wareegay Isbaanish anigoo rakibaya Icedove- | 10n-es-es. Waxaan sidoo kale rakibay (laga bilaabo menu-ka 'Icedove> qalabka> plugins) kordhinta Linux - Habka Hillaaca 1.2b2. Mar labaad, aan taageerno horumarinta Debian.
Available Pink 2012 Beta: Mid kale oo ah degmo ku taal Mandriva
OS (distros) inta badan ay isticmaalaan akhristayaashayada